[Wednesday, September 6th, 17] :: Dowladda Soomaaliya oo sheegtay in ay sharci ahayd in Qalbi dhagax lagu wareejiyo Itoobiya
Muqdisho (RH) Dowladda Soomaaliya ayaa maanta oo Arbaca ah soo saartay war cad oo ku aadan arrinta Cabdikariin Shiikh Muuse Qalbi-dhagax oo dhawaan lagu wareejiyey dowladda Itoobiya.
Kulanka oo ahaa mid aan caddi ahayn ayaa waxaa laga soo saaray toddobo qodob oo looga hadlay shirka golaha wasiirada.
Wasiirka warfaafinta Soomaaliya, Cabdiraxmaan Cumar Yaarisow ayaa saxaafadda u akhriyey qoddobada ka soo baxay shirka.
Wasiirka ayaa ugu horreyn sheegay in golaha wasiirada ay isku raaceyn in uu Cabdikariin Shiikh Muuse uu ahaa nin ka tiran urur argagixiso oo xiriir la leh Al-Qaacida isla markaama uu amni darro ka waday dalka iyo gobalka geeska Afrika sida uu hadalka u dhigay.
Wasiirka warfaafinta ayaa sidoo kale sheegay in dowladda Soomaaliya ay xaqiijineyso in dhiibistii Cabdikariin Qalbi-dhagax ay ahayd mid sharci ah maadama uu ahaa nin xiriir la leh waxa loogu yeero “Argagixisada”
Wasiirka warfaafinta Soomaaliya oo saxaafadda la hadlay
Kulanka maanta golaha wasiirada waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiyaha golaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo Nabaddoon Maxamed Xasan Xaad oo ka mid ah odayaasha Muqdisho.
Warar ayaa sheegaya in shirka loogu yeeray guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Cismaan Jawaari balse kama soo qeybgalin.
Ma cadda waxa hadda keenay in dowladda Soomaaliya ay si cad uga hadasho arrinta Cabdikariin Qalbi-dhagax oo ahayd mid si weyn loo hadalayey maalmihii la soo dhaafay.
Halkan Hoose ka Akhriso Qoddobada ka soo baxay shirka golaha wasiirada
Si kastaba, go’aankan ayaa soo gabagabeenaya aamusnaatii dowladda ee arrinta Cabdikariin Shiikh Muuse Qalbi-dhagax oo toddobaadkii horre dowladda ay ku wareejisay xukuumadda Addis Ababa.